Saan Ugu Raaxey Hadii Aysan Raaxo Madaxa La Qarxin gaaloos Ka Mas`uul Ah. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Saan Ugu Raaxey Hadii Aysan Raaxo Madaxa La Qarxin gaaloos Ka Mas`uul Ah.
Saan Ugu Raaxey Hadii Aysan Raaxo Madaxa La Qarxin gaaloos Ka Mas`uul Ah.
Bulsha:- Ragga badan ayaa gees mara baashaalka lama huraanka ah ee ka horeysa cayaarta sariirta waxa ayna badankooda xoogga saaraan marxalada galmada oo labada xubin in ay durba isku milmaan , waxa ayna ilaawaan baashaalka hore iyo fara kacayaarka ka dambeeysa galmada.
Qorshaha ku darso in haddii uu yar yahay baashaalka ka horeeya galmada tooska ah iyo kan ka dambeeyaa in haweeneyda aysan heleyn dharag ku aadan galmadii aad sameysay ee loo yaqaan gariirka galmada .
Ugu yaraan haweeneyda waxa ay u baahan tahay gacma gacmeyn gaaraya ilaa 20-daqiiqo oo aad ka xod-xodiso goobaha ugu macaan dareenkeeda waxa ayna taasi ay ku heleysaa macaanka looga dhargo galmada ee gariirka.
Haweeneyda wax raaxo kama heleyso si waliba oo malabyarowga loogu garaaco hadii aan si wacan huradada looga kicin dareemaheeda kacsiga oo aysan la hamaasan kacsi .
Hadaba galmada ka hor sidee haweeneyda dareenkeda kacsi hawada loo gilin karaa.
Marka hore waxa ninka la gudboon in haweeneydiisa ku war giliyo saacado ka hor in uu u faruuryo qaniinsanayo oo uu doonayo in macaankeeda dha-dhamiyo (Yanii in uu doonayo in uu u galmoodo), waxa ayna markaas haweneyda nafsiyan iyo jir ahaanba u diyaar garoobeysa weerarkaasi.
Ninku waxa uu ku kacsadaa eegmada(isaga oo eega gabadha)halka gabartana ay ku kacsato hadalka macaan waxaa marka ninyahoow kuula talinaya in erayga waan ku jeclaahy ka ilaawin macaantaada galmo waliba horteeda si waliba oo xariirkiina sanado uga soo wareegatay.
Taabasho, Dhunkasho Iyo Hadal.
Qaladaadka ugu badan ee ninyahoow kaa dhaca waxaa ka mid ah adiga oo ku soo deg dega in durba aad taabto oo aad kiciso goobaha xaraarada kacsiga leh sida naasaha, Kintirka iyo labada bishimood ee xubinta taasina waa qalad weyn .
Waxaa muhiim ah in aad ka fogaato goobahaas kana dhigto meelaha ugu dambeeya ee aad qanjaruufaneyso(Qanjiiro).
Ogaaw naasaha iyo xubinta haweenka ma ah kuwo horay ka qaata oo ka jawaaba dareenka kacsiga balse waxa ay kacaan marka ugu yaraan 20-daqiiqo oo istiin la soo sameeyo .
Marka hore soo istiimi oo soo salaax labada garab , dhabrka dambe , canjarada , qoorta , si tartiib ah u shumi faruuryaha , daanka laba farood uga salaax , dhagta ka shumi markaasna u sii raaci waan ku jeclahay.
Marka aad dareento in haweeneyda heshay baashaal ku filan oo ay neef tuureyso ku adkeey shuminta iyo dhuuqmada ogaaw waxaa la gaaray xiligii naasaha oo kacsi ayay la qarxi rabaan maxaan kaaga sii sharaxaa waan ku jeeda waaw ayaa ka soo dhaw .
Hadaba Galmada Ka Dib Maxay Haweenku Jecel Yihiin .
Marka ay gabadhu hesho gariirka galmada ogaaw hadaad talaabooyinkan u sameeyo waxa ay heleysaa raaxadii galmada tooska aheyd mid ka macaan .
Waxa ay haweenka u baahan yihiin galmada ka dib in la qoor giliyo iyo in xabadka la giliyo oo xabadkana lagu hayo ilaa 5 daqiiqo iyadoo shumiskuna yahay mudanaha la adeeco.
Faraxdii galmada macaaneed ay ka qaadatay ma dhameystirmeyso haddii arimahaan aysan helin , waxaa hubaal in marka galmada dhamaato in ninka durba uu halaacsi bilaabayo oo uu hurdoonayo .
Ninyahoow doqonka ah ha sameyn sidaaas la fara cayaar macaantaada hana ilaawin in aad u mahad celiso ama dhabarka u jeedi ma tihid qof ixsaan loo galo.